पक्राउ परेका पारस शाह प्रहरी चौकी नपुग्दै बिच बाटो बाटै छुटे: माथिको आदेश भन्दै छोडियो…कसले छुटायो त यो हेर्नुस। - खबरदार न्युज
पूर्वयुवराज पारस शाहले प्रहरीमाथि अ’भ’द्र व्य’व’हा’र गरेका छन्। शुक्रबार साँझ महाराजगञ्जस्थित नारायणगोपाल चोकमा शाहले प्रहरीलाई यस्तो गरेका हुन्।
हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकलमा सवार शाहलाई प्रहरीले समातेको थियो। पारसले त्यसक्रममा प्रहरीलाई ध’म्की’पूर्ण शैलीमा छोड्न भनिरहेको सार्वजनिक भएको भिडिओमा सुन्न सकिन्छ।
शुक्रबार साँझ काठमाडौंको महाराजगञ्ज चोकमा ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीसँग उनी वा’दवि’वादमा उत्रिएका थिए। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा स्रोतका अनुसार हेल्मेट प्रयोग नगरी केही व्यक्तिले मोटरसाइकल चलाइरहेको देखेपछि ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीले उनीहरुलाई रोकेका थिए।
हेल्मेट नलगाइ मोटरसाइकल चलाउनेमध्येका धेरैले प्रहरीसँग गल्ती स्वीकार गरेपनि पारस शाह भने उल्टै वा’दवि’वादमा उत्रिएका ट्राफिक महाशाखाका एक प्रहरीको भनाइ छ। पूर्व युवराज पारसले प्रहरीसँग झ’गडा गरिरहेको विषयमा केही प्रत्यक्षदर्शी (सर्वसाधारण)ले भिडियो समेत खिचेका छन्। जसमा प्रहरीले उनलाई प्रहरी कार्यालय जान भनिरहेको सुनिन्छ। तर, पारस भने ‘जान्न, म जान्न, के गर्छस्?’ भनिरहेका सुनिन्छ।
त्यहाँ रहेका प्रहरी कर्मचारीले सञ्चार सेटमार्फत् तालुक निकायमा खबर गर्दै गाडि पठाउन माग गरिरहेका भिडियोमा सुनिन्छ। त्यसबीचमा पारससँगै आएका उनका समर्थकले हो–हल्ला गरेको पनि भिडियोमा देखिन्छ।
नेपाल लाइभका अनुसार पारसलाई चौकी नल्याइ बाटोमै छोड्नु भन्ने आदेशपछि उनलाई कुनै कारबाही नगरी छाडिएको महानगरीय प्रहरी बृत्त महाराजगञ्जका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। ‘बाटोमा सर्वसाधारणको भिड पनि बढ्ने र अनावश्यक तनाव सिर्जना हुने भन्दै माथि (महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं)बाटै छाड्नु भन्ने आदेश आयो,’ महाराजगञ्ज बृत्तका ती प्रहरी कर्मचारीले भने।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरि पालले भने गल्ती स्वीकार गरी माफी मागेपछि पारस र उनका समर्थकलाई छाडिएको बताए।
‘उनीहरुले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको, हेल्मेट नलगाएको देखियो। त्यसबारे कानुनी रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ नै। ट्राफिक नियम उल्ल‌ंघन गर्दा कसैलाई पक्राउ त गरिँदैन,’ एआईजी पालले भने, ‘ट्राफिक नियम उल्ल‌ंघन गरेका कारण पछि जरिवाना गर्ने गरी आज चाहिँ यस्तो गल्ती पछि नदोहोर्‍याउने भनेर छाडियो।’
Previous post आ’त्मह-त्या गरेका भनिएका बिजय शाही कालिकोटमा जी-उँदै भेट्टिए।
Next post यो मेरो जिन्दगी हो, यतिसम्म कि म अमेरिकामा सवारी गर्दापनी हेल्मेट लगाउन्न: पारश शाह । विवादपछि पहिलोपटक मुख खोले ।
Previous post:आ’त्मह-त्या गरेका भनिएका बिजय शाही कालिकोटमा जी-उँदै भेट्टिए।
Next post:यो मेरो जिन्दगी हो, यतिसम्म कि म अमेरिकामा सवारी गर्दापनी हेल्मेट लगाउन्न: पारश शाह । विवादपछि पहिलोपटक मुख खोले ।
दु:खद खबर: “गण्डकी छड्के”का संयोजकको नि’धन! कार्यक्रम नै बन्द। (221)
३०० घरहरु पुरिए, नौ जनाको श-व भेटियो, ५५ भन्दा बढि अझै बेपत्ता ! बिन्ती छ सेयर गर्नुहोला। (208)